Ranom-boankazo poara, seleri ary karaoty… manala mony sy “points noirs”
Ahazoana ranom-boankazo malefaka sy mamy tsara ny fifangaroan’ny poara sy seleri ary karaoty. Manadio ny singa rehetra tsy ilain’ny vatana ity ranom-boankazo ity ka manadio ny hoditra. Tena tsara ho an’ireo te hanala mony sy “points noirs” izy ity.
Zava-pisotro zavoka sy kaokaombra ary yaorta… tsara atao sakafo maraina
Ny akora rehetra anatin’ity zava-pisotro iray ity dia feno otrik’aina ilain’ny vatana hiatrehana ny tontolo andro. Zava-pisotro tena tsara hanombohana ny tontolo andro izy ity satria sady ahitana vitamina C no ahitana proteina, izay samy ilain’ny vatana